Masagawaa:-Farmaajo iyo Kheyre ayaa Faragalin Ku Haya Maamulka Galmudug | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Masagawaa:-Farmaajo iyo Kheyre ayaa Faragalin Ku Haya Maamulka Galmudug
Masagawaa:-Farmaajo iyo Kheyre ayaa Faragalin Ku Haya Maamulka Galmudug
War Saxaafadeed ay soo saartay Galmudug uuna ku saxiixnaa wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Maxamuud Aadan Cusmaan (Masagawaa) ayaa lagu dhaliilay hoggaanka dawalda Federaalka, gaar ahaan Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha oo la sheegayo in ay ku hayaan Galmudug faragelin qaawan.
In maamulka Galmudug uu ku faraxsan yahay sida dadka gobolka diyaar ugu yihiin difaaca maamulka iyada oo loogu baaqay dadwaynaha reer Galmudug in aysan dheg-jalaq u siinin kuwa ka shaqeynaaya tafaraaruqa iyo kala qaybsanaaanta.
In maamulka Galmudug ka shaqeyn-doono danta iyo maslaxada Galmudug iyaga oo shacabka ka codsaday in ka shaqeeyaan midnimada iyo Wadajir ka Galmudug.
Beesha Caalamka:“ Beesha Caalamka way arkaan in Dawlada Federaalka ay ku hawlan tahay duminta iyo kala dirka Dawlad Goboleedka. Waxaan leenahay Dawlada Federaalka way gabtay ilaalinta midnimada iyo wadajirka dalka. Hadaba waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka in ay arrinkan sida ugu dhaqsaha badan ugu soo joogsadaan